Maraykanka, 16 February 2018
Khamiis 16 February 2018
Qareennada Trump oo Ka Digey Wareysiga Mueller
Qareennada madadaxweynaha Mareykanka Doland Trump, ayaa kula talinaya madaxweynuhu inuusan oggolaan wareysi uu damacsan yahay baaraha gaarka ah ee Robert Mueller, sida uu wargeyska New York Times baahiyay Isniintii.
Ciyaarta Kamadanbeysta ah ee Mareykanka, Super Bowl iyo Xaley
Dadaal lagu Badbaadinayo Soomaali laga Tarxiilayo Maraykanka
Sharci-yaqaanno Soomaaliyeed iyo qaar ka mid ah xubnaha u dhaq-dhaqaaqa xuquuqda aadamaha ayaa gaaray magaalada Miami ee gobolka Florida, halkaasoo ay ku xiran yihiin dhalinyaro Soomaaliyeed, iyadoo halkasina horraantii bishii Diseembar laga musaafuriyay tiro kale oo Soomaali ah.
Wareysi: Qorshaha Donald Trump ee Soogalootiga
Khudbaddii Madaxweyne Donald Trump uu xalay jeediyay waxa ku jirtay hindise uu ku sheegay inuu ku doonayo in lagu darro isbeddel lagu sameeyo sharciga socdaalka ee Mareykanka.
Donald Trump, madaxweynaha Maraykanka ayaa xalay shacabka Maraykanka u jeediyay khubaddiisii u horreysay ee sannadlaha ahayd, isagoo sheegay ini maamulkiisu uu abuuray2.4 malyuun oo shaqooyin cusub ah tan iyo markii ay xilka qabteen.
Trump oo Xayiraaddii ka Qaaday Qaxootigii Imaan Jirey Mareykanka
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay Isniintii shalay inay dib u bilaabeyso aqbalidda qaxootiga ka imaanaya 11 waddan, oo dadkii ka imaanayay uu hore u mamnuucay maamulka madaxweyen Trump.